SDL: La Wadaag Farriin Midaysan Macaamiishaada Caalamiga ah | Martech Zone
SDL: La Wadaag Farriinta Midaysan Macaamiishaada Caalamiga ah
Khamiista, Sebtember 25, 2014 Wednesday, September 24, 2014 Douglas Karr
Maanta, suuqleyda raadinaya sida ugu dhaqsaha badan uguna xariifsan ee lagu maareeyo khibrada macaamiishooda waxay madaxooda u jeedinayaan daruurta. Tani waxay u oggolaaneysaa dhammaan macluumaadka macaamiisha inay ku qulqulaan kana baxaan nidaamyada suuq-geynta si habsami leh. Waxay sidoo kale ka dhigan tahay in astaamaha macaamiisha si joogto ah loo cusbooneysiiyo iyo macluumaadka macaamiisha si otomaatig ah loo abuuro waqtiga-dhabta ah, oo bixiya aragti dhammaystiran oo isku dhafan oo ku saabsan isdhexgalka macaamiisha ee guud ahaan shirkadda calaamadaha.
SDL, hal abuureyaasha Macaamiisha Khibrada Macaamiisha (CXC), ayaa sheegaysa in suuqleyda maareynaya khibradooda macaamiisha ee daruuraha ay leeyihiin awood ay ku maareeyaan oo keliya ololeyaasha, laakiin inay abuuraan wareegyo is-dhexgal joogto ah oo macaamiisha ku gaara shuruudahooda. Aynu eegno sida tani u shaqeyso:
Fiidiyowga kor ku xusan, waxaad ku baraneysaa in SDL CXC ay ku soo gudbineyso khibrad la'aan, waayo-aragnimo xog-wadis ah meel kasta oo safarka macaamiisha ah - kanaallada, aaladaha iyo luqadaha oo dhan. Hal madal oo ku saleysan SaaS, CXC waxay bixisaa suunka maareynta macaamiisha isku dhafan ee ugu horreysa ee warshadaha (CX) oo ay ku jiraan bulshada, nuxurka mareegaha, ololaha, e-ganacsiga, Analytics iyo qalabka maareynta dukumiintiyada. CXC waxay sidoo kale la midowdaa SDL Language Cloud Cloud si astaamuhu u kordhiyo fursadaha ay kula macaamilayaan macaamiisha afkooda iyo dhaqankooda.
SDL Customer Experience Cloud (CXC) waa madal tiknoolajiyad isku dhafan oo u saamaxaysa shirkadaha inay u soo gudbiyaan macaamiisha meel kasta oo safarka iibsiga ah - dhammaan marinnada, aaladaha iyo luqadaha. 72 ka mid ah 100-ka nooc ee adduunka ugu sarreeya waxay adeegsadaan tikniyoolajiyadda SDL si ay u siiyaan khibrado macmiil oo sarreeya
Habka halbeegga ah ee SDL wuxuu siiyaa suuqleyda aragti mideysan macaamilka macaamiishooda. Hal meel calaamaddu waxay ka arki kartaa waxtarka xeeladeheeda waxayna sameyn kartaa isbeddello isdaba joog ah dhammaan macaamilka macaamiisha, ama qaado hanaan ka sii adag haddii loo baahdo.
Halkan waxaa ah tusaale ka mid ah is-dhexgalka adeegsadaha CXC:
SDL CXC wuxuu u balan qaadayaa hab dhaqso badan oo sahlan suuqleyda inay ula macaamilaan macaamiishooda kuna xoojiyaan:
Macno u yeelo wadahadalka macaamiisha adoo aruurinaya xogta macaamiisha meel kasta oo taabasho ah si firfircoon loogu wargaliyo suuqgeynta iyo go'aamada wax soo saarka
Keeno ololeyaal dijitaal caqli badan adoo adeegsanaya Analytics iyo beegsiga isdhexgalka ololaha ee macaamiisha maanta
Awoodda khibradaha ku habboon adoo falanqeynaya astaamaha iyo dabeecadaha waqtiga dhabta ah si loo abuuro gaarsiinta xaalad ahaaneed oo ku saleysan aaladda, waqtiga maalinta, goobta, luqadda, taariikhda macaamiisha iyo inbadan
Macaamiisha SDL, Schneider Electric, Khabiir ku takhasusay maareynta tamarta ayaa ogaadey in habka hal-abuurka ah iyo dariiqa ku saleysan daruuriga ay ka dhigeyso gaarista yoolalka ay u leeyihiin bixinta khibrad macmiil midaysan oo aan xuduud lahayn. Shirkaddu waxay ka kooban tahay in ka badan 100 waddan iyo qaybo ganacsi oo badan. Waxay la kulmeen caqabad guud oo ku saabsan calaamadaha caalamiga ah, shirkadaha: Sidee shirkad leh qaybsi, wax soo saar kala duwan iyo xalka kala duwanaanta, oo ka shaqeeya adduunka oo idil, u gudbisaa wax la xiriira, iswaafaqsan oo dhakhso leh dhammaan macaamiisha iyo juqraafiyiinta ay u adeegaan?
Si loo daboolo baahidan, waxay raadsadeen xalka ku saleysan websaydhka kaas oo udub dhexaad u noqon doona istiraatiijiyadooda suuq geynta dijitaalka ah, kuna waafajinaya khibradeeda macaamiisha dhijitaalka ah una oggolaan doonta heerka saxda ah ee dabacsanaan si loola qabsado baahida macaamiisha maxalliga ah. SDL ayaa bixisay intaas.
Waxaan aad u xiiseyneynaa inaan si isdabajoog ah u kobcinno khibradeena websaydhka ee ku xeeran macaamiisheenna iyo inaan la kulanno baahiyahooda is-beddelaya. Waxaan aaminsanahay SDL inay si fiican u meeleeysay si ay nooga caawiso inaan u beddelno boggeena internetka waayo-aragnimo gebi ahaanba shaqsiyadeed, oo ka jawaabeysa baahiyaha gaarka ah ee macaamiil kasta. Markaan gaarsiinayno heerkaan ku xirnaanta macaamiisheena khadka tooska ah, waxay helayaan jawaabo dhaqso leh oo ku saabsan baahidooda, astaantooda astaanta ayaa kordheysa oo nidaamkayaga deegaanka oo dhan ayaa guuleysanaya. Shawn Gubasho, Madaxweyne Ku Xigeenka Webka & Suuqgeynta Dijital ee Schneider Electric
Baro wax badan oo ku saabsan sida Schneider Electric waxay isticmaaleysaa SDL CXC, halkan guji. Wax badan ka baro SDL Khibrad Macaamiil Cloud.
Tags: iskutallaabtaqalabka iskutallaabta- luqadda isweydaarsigaxirmooyinka xogta macaamiishadaruuraha khibrada macaamiishamaaraynta khibrada macaamiishamacaamilka macaamiishawareegga isdhexgalka macaamiishais-dhexgalka macaamiishacxmaaraynta cxcaalamkafarriinta adduunkaku habboonkhibrad macmiil isku dhafanSuite maareynta khibrada macaamiisha isku dhafanololeyaal dijital ah oo caqli badanwareegga isdhexgalkacaalami ahfariin caalami ahwaqtiga dhabta ahsaasSchneider Electricsdlsdl cxcdaruuraha luqadda sdlShawn Gubasho
Leanplum: A / B Tijaabi Mawduucaaga Mobilada iyo Fariintaada
5 Tilmaamood oo aad si guul leh ugu beddeleyso rajadaada khadka tooska ah macaamiil